हाम्रो डचटाउन छिमेकीहरूका लागि मद्दत - डचटाउनस्टाइल.org। डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
हाम्रो डचटाउन छिमेकीहरूको लागि मद्दत गर्नुहोस्
प्रकाशित मार्च 29th, 2020
अपडेट १ April अप्रिल बिहान at बजे।
डचटाउन र हाम्रो छिमेकमा साना व्यवसायका बासिन्दाहरूको लागि भर्खरको विधायी बिल र गैर नाफामुखी कार्यको अर्थ के हो? हामी विभिन्न बिलहरूको बारेमा हामीलाई के थाहा छ र कसरी त्यसले हाम्रो छिमेकीहरू र स्थानीय साना व्यवसायहरूलाई असर गर्न सक्छ भनेर विच्छेद गर्न हामी सक्दो कोसिस गर्छौं।
हाम्रो डचटाउन छिमेकीहरूको लागि
व्यक्ति र परिवारलाई भुक्तान
यो केयर ऐन (कोरोनाभाइरस सहायता, राहत, र आर्थिक सुरक्षा ऐन) ले परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद स्वरूपमा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्नेछ, जबकि COVID-१ of पछि जागिर गुमाएकाहरूलाई बेरोजगार सुविधाहरु पनि विस्तार गर्ने छ।
व्यक्ति जो एक वर्ष $ 75,000 भन्दा कम कमाउन को एक पटक नगद भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्छ 1,200 500। यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ भने, हरेक पति / पत्नीले त्यो रकम पाउनेछ। यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, प्रत्येक बच्चा अतिरिक्त $ 150,000 हुनेछ। फलस्वरूप, यदि तपाईं विवाहित परिवारमा हुनुहुन्छ भने दुई बच्चाहरू $ १,3,400०,००० भन्दा कम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले $ 198,000०० कुल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको परिवारले त्यो भन्दा बढी पैसा कमाउँछ भने, तपाईंले प्राप्त रकम घट्छ र families १ ,XNUMX, ००० भन्दा बढी बनाउने परिवारहरूले कुनै नगद सहयोग प्राप्त गर्दैनन्।
चेक मेल मार्फत बाहिर जान्छ वा आन्तरिक राजस्व सेवा वा सामाजिक सुरक्षा प्रशासनको साथ एक व्यक्तिमा फाइलमा भएको जानकारीमा निर्भर गर्दै प्रत्यक्ष जम्मा गरिन्छ। पैसा अग्रिम कर क्रेडिटको रूपमा संरचना गरिएको छ।
कर म्याद थपियो
करहरूको कुरा गर्दै, को लागि समयसीमा संघीय आय कर, मिसौरी राज्य आय कर, र सेन्ट लुइस आय करहरु को शहर जुलाई १ 15, २०२० मा विस्तार गरिएको छ। जे होस्, केहि प्रकारहरू र रिपोर्टि still अझै बाँकी छ, त्यसैले यदि तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् भने एक कर पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
परिवारका लागि अन्य राहत
CARES ऐन प्रावधानले खाना र पोषण कार्यक्रमहरूको लागि आपतकालीन कोषहरू मिसौरीको राज्यलाई परिवर्तनको फाइदा लिन छिटो कदम चाल्छ। यसले बृद्धि हुने सम्भावना पनि समावेश गर्दछ SNAP बेफाइदाहरू र स्कूलमा बच्चाहरूसँग जो परिवारको लागि SNAP योग्यता विस्तार गर्नको लागि जो अहिले घरमा छन्। भ्रमण गर्नुहोस् मिसौरी सामाजिक सेवा विभाग अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्न।
बाल हेरचाह प्रदायकहरूको लागि राहत
CARES ऐनले बाल-देखभाल प्रदायक लगायत स्व-रोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई महामारी बेरोजगार सहयोगको लागि योग्य हुन अनुमति दिनेछ।
बेरोजगारका लागि राहत
बेरोजगारी बीमा भुक्तान हप्ताको अतिरिक्त $ 600 द्वारा वृद्धि भइरहेको छ। मिसौरी बेरोजगारी फाइदाहरूको लागि यहाँ फाईल.
हाम्रो डचटाउन साना व्यवसायहरूको लागि
सानो व्यवसाय प्रशासन विपत्ती ansण
मिसौरीलाई स Miss्घीय सरकारले प्रकोप क्षेत्रको रूपमा तोक्यो जसले साना व्यवसायका लागि अवसर स्वतन्त्र गर्‍यो प्रकोप राहत loansणको लागि आवेदन दिनुहोस् सामान्यतया आगो, बाढी, वा अन्य मौसम घटनाहरू जस्तै चीजहरूको लागि आरक्षित। उपलब्ध पैसाको रकम पनि CARES ऐन मार्फत बढाइएको थियो।
आर्थिक चोट प्रकोप ansणका लागि योग्यता COVID-19 को वित्तीय प्रभावमा आधारित छ। साना व्यवसायका लागि ब्याज दर 3.75 प्रतिशत हो। निजी गैर नाफा नकमाउने संस्थाका लागि ब्याज दर २.2.75 percent प्रतिशत छ। एसबीए अधिकतम years० बर्ष सम्मको भुक्तान सस्तो राख्नको लागि दीर्घकालीन पुन: भुक्तानीको साथ loansण प्रदान गर्दछ र वित्तीय क्षमता बिना संस्थालाई उपलब्ध छन् कठिनाई बिना प्रतिकूल प्रभाव अफसेट गर्न वित्तीय क्षमता बिना।
यी ण विभिन्न thingsण, पेरोल, भुक्तानयोग्य खाताहरू, र COVID-19 को कारण अर्जित अन्य बिल सहित विभिन्न चीजहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अधिक विवरण प्राप्त गर्न र लागू गर्न, अनलाइन पोर्टल हेर्नुहोस्, तर सावधान रहनुहोस् जुन मागले वेबसाइटलाई ढिलो बनाउँदछ र कहिलेकाँही क्र्यास पनि हुन्छ।
आवेदकहरू अनलाइन आवेदन गर्न सक्दछन्, थप आपतकालीन सहायता जानकारी प्राप्त गर्न र अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस् SBA वेबसाइट। आवेदकहरूले एसबीए ग्राहक सेवा केन्द्र मा पनि कल गर्न सक्दछन् 800-659-2955 वा इ-मेल आपतकालीन सेवा .@sba.gov SBA आपतकालीन सहायतामा अधिक जानकारी को लागी। बहिरा वा सुन्न नसक्ने व्यक्ति कल गर्न सक्छन् 800-877-8339.
जबकि यो अझै सिफारिस गरिएको छ कि आवेदकहरूले SBA प्रकोप loanण पोर्टल मार्फत आवेदन दिन कोसिस गरिरहनुहोस्, यो ट्राफिकको उच्च मात्राका कारण केहीका लागि सम्भव नहुन सक्छ। तपाईं कागज फारमहरू पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई मेल पठाउन वा इलेक्ट्रॉनिक रूपमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। पूरा भएका आवेदनहरू अमेरिकाको साना व्यवसाय प्रशासन, प्रसंस्करण र वितरण केन्द्र, १ 14925 76155 २XNUMX किंग्सपोर्ट रोड, फोर्ट वर्थ, Tx।, XNUMX XNUMX१XNUMX वा ईमेलमा पठाइनुपर्दछ। आपत्तिलोन्स@sba.gov.
अन्य सानो व्यापार संसाधन
COVID-19 क्षेत्रीय व्यापार सूचना केन्द्र
यो सेन्ट लुइस क्षेत्रीय कक्ष COVID-19 मा जानकारी प्रदान गर्न सबै भन्दा अप-टु-डेट वेबसाइट राख्दै छ, व्यापार स्रोतहरू, क्षेत्रीय स्रोतहरू, यात्रा, र घटना अद्यावधिकहरूको जानकारीको साथ। कृपया प्राय: जाँच गर्नुहोस् पछिल्लो जानकारी हेर्नका लागि।
क्षेत्रीय प्रभाव सर्वेक्षण
कृपया क्षेत्रीय प्रभाव सर्वेक्षण भर्नुहोस् सेन्ट लुइस क्षेत्रीय चेम्बर द्वारा आयोजित ताकि उनीहरु स्थानीय व्यवसाय को आवश्यकताहरु को बारे मा र उनीहरुलाई राम्रो सेवा कसरी अझ बढी जान्न सक्छ।
सानो व्यापार संसाधन कोष
यो सेन्ट लुइस आर्थिक विकास साझेदारीर सेन्ट लुइस विकास निगम एक प्रस्ताव गर्दै छन् साना व्यवसायका लागि zero 5,000 सम्मको शून्य ब्याज loanण सेन्ट लुइस र सेन्ट लुइस काउन्टीको शहरमा जुन COVID-१ crisis को स to्कटको कारण आर्थिक क्षति भएको छ। Detailsण विवरण यहाँ पाउन सकिन्छ।
यहाँ loanणको लागि आवेदन दिनुहोस्। कार्यक्रमको बारेमा प्रश्नहरूको लागि, कृपया ईमेल गर्नुहोस् bizhelp@stlpartnership.com.
सेन्ट लुइस समुदाय फाउंडेशन क्षेत्रीय प्रतिक्रिया कोष
यो सेन्ट लुइस समुदाय फाउंडेशन साना व्यवसाय र नाफारहित संस्थालाई मद्दत गर्न दुई कोषहरू स्थापना गरेको छ।
यो गेटवे लचीलापन कोष साना स्थानीय स्वामित्व वाले व्यवसायहरू र उनीहरूका कामदारहरूलाई छोटो अवधिको मौद्रिक राहत प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
यो क्षेत्रीय प्रतिक्रिया कोष बच्चाहरू, वृद्ध, र पृथक सहित भाइरसले पीडित मानिसहरूलाई सेवाहरू पुर्‍याउने स्थानीय गैर-नाफामुखी संस्थालाई सीधै सहयोग गर्न स्थापित गरिएको थियो।
अमेरिकाको एसबीडीसी — मिसौरी
व्यवसाय मालिकहरूलाई COVID-19 सँग सम्बन्धित परिवर्तनशील परिस्थितहरूको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्न मिसौरी सानो व्यवसाय विकास केन्द्र (SBDC) सँग व्यवसायका लागि केहि सुझावहरू छन् जुन आर्थिक प्रभाव पारिएको छ।
परिवार पहिलो कोरोनाभाइरस प्रतिक्रिया ऐन, साना व्यवसाय, र कर्मचारी बिदा
यदि तपाइँसँग कर्मचारी छन् भने, पारिवारिक मेडिकल लीभ ऐनमा पनि केही परिवर्तनहरू छन्। यो सामान्यतया कभर रोजगारदातालाई मात्र लागू हुन्छ जसको who० वा बढी कर्मचारीहरू छन्। आपतकालिन भुक्तान बिरामी छुट्टी ऐन (EPSLA) अस्थायी रूपमा पूर्ण-समय कामदारहरूलाई २ हप्ता सम्मको पूर्ण तलब भुक्तान गर्न लगाउँछ जब तिनीहरू कोरोनावाइरस-सम्बन्धित कारणहरूको लागि काम गर्न रिपोर्ट गर्न असमर्थ हुन्छन्। यो 50०० भन्दा कम कर्मचारीको साथ कुनै पनि व्यवसायमा लागू हुन्छ।
यसबाहेक, एक एकदम नयाँ कानून, आपतकालीन परिवार र मेडिकल छुट्टी विस्तार ऐन, एक नियोक्ता द्वारा कम्तिमा days० दिन (बिदाको पहिलो दिन भन्दा पहिले) लाई रोजगार दिनको लागी कुनै पनि व्यक्तिको आवाश्यक हुन्छ। कर्मचारी, जो काम गर्न वा टेलिवर्क गर्न असमर्थ छ, कर्मचारीको बच्चाको हेरचाह गर्न (१ 30 बर्ष भन्दा कम उमेरको) यदि बच्चाको स्कूल वा हेरचाह गर्ने ठाउँ बन्द छ वा बच्चाको हेरचाह प्रदायक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको कारण अनुपलब्ध छ। यस ऐनले कर्मचारी पूर्ण-समय वा आंशिक-समयको वास्ता नगरिकन पनि लागू गर्दछ।
पहिलो १० दिन EFML भुक्तान गरिएको हुन सक्छ। यस १०-दिन अवधिको अवधिमा, एक कर्मचारीले कुनै पनि आर्जित भुक्तानी बिदा (जस्तै छुट्टी वा बिरामी छुट्टी) लाई केही वा सबै १० दिनको अमान्य भुक्तानी अवधि समेट्नको लागि रोज्न सक्दछ, तथापि, रोजगारदाताले कर्मचारीलाई भुक्तानी बिदाको विकल्प लिन आवश्यक छैन। १०-दिन अवधि पछि, नियोक्ताले पूर्ण-समय कर्मचारीहरूलाई दुई तिहाईमा तिर्नु पर्छ कर्मचारीको नियमित दरको घण्टाको संख्यामा जुन अन्यथा सामान्य रूपमा निर्धारित गरिएको हुन्छ। नयाँ ऐनले यस वेतन अधिकार प्रति दिन $ २०० र प्रति कर्मचारीको कुलमा १०,००० डलरमा सीमित गर्दछ।
रोजगारदाताहरूलाई डलर कर क्रेडिटहरूको लागि निश्चित डलरको रूपमा भुक्तान गरिनेछ। कानूनले प्रत्येक क्यालेन्डर क्वार्टरको लागि रोजगारदाताले भुक्तान गरेको बिरामी बिदामा "योग्यताको १००% बराबर रकम" मा फिर्तीयोग्य ट्याक्स क्रेडिटहरूको लागि अनुमति दिन्छ। क्रेडिट सामाजिक सुरक्षा करको नियोक्ताको हिस्साको बिरूद्ध लिन सकिन्छ। यद्यपि त्यहाँ केप र सीमाहरू छन्। विशेष रूपमा, बिरामी बिदाको फिर्ताको लागि योग्यता घटनामा निर्भरता प्रति दिन $ 100 र 200 511 बीचमा क्याप गरिएको छ। बिरामी बिदाको लागि क्रेडिटमा दुई हप्ता क्याप प्रभावी रूपमा हुनेछ।
यद्यपि यस ऐनमा भाषिक सचिवलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र आपतकालिन उत्तरदाताहरूलाई त्यस्तो छुट्टी लिन सक्ने कर्मचारीको परिभाषाबाट हटाउन र leave० भन्दा कम कर्मचारीको साथ सानो व्यवसायलाई छुट दिन आवश्यक पर्ने भाषा पनि समावेश छ यदि आवश्यक छुट्टीले उनीहरूको व्यवहारिकतालाई जोखिममा पार्दछ भने। व्यापार यस छुटले स्पष्ट रूपमा केही भ्रम पैदा गरेको छ कि कसले गर्छ र दुई हप्ताको बिदा भुक्तान गर्नुपर्दैन।
किनकि कानूनमा यी परिवर्तनहरू जटिल छन् र कुनै पनि साना व्यवसायले उनीहरूको व्यवसायिक निर्णयहरू लिनु अघि थप संसाधनहरू वा कानूनी व्यवसायीसँग परामर्श लिनु पर्छ।
शिक्षा र छलफल
कोषाध्यक्ष तिशौरा जोन्स र डन काल्लोवेले व्यक्ति, साना व्यवसाय, र नाफा नकमाउनेहरूको लागि वित्तीय राहतबारे गहन छलफल गरे यो भिडियो.
सानो व्यवसाय प्रभाव सर्वेक्षण र मुख्य बिहान
मिसौरी मुख्य सडक जडान एक लिइरहेको छ सर्वेक्षण मिसौरीमा साना व्यवसायको समस्यालाई बुझ्न र स्थानीय साना व्यवसायहरूलाई वर्तमानमा सामना गरिरहेका चुनौतीहरू बुझ्न मद्दत गर्न।
MMSC साप्ताहिक वेबिनारहरू र छलफलहरू पनि प्रस्ताव गर्दैछ, मुख्य बिहान, हरेक बुधवार बिहान :8::30० बिहान। सिक्नुहोस् कि कसरी अन्य साना व्यवसायहरू र वरपरहरू COVID-19 संकटसँग डील गर्न अनुकूल छन्।
MMSC हालसालै साझेदारी गरिएको छ DT2 डाउनटाउन डचटाउनलाई पुनर्जीवित गर्न अर्बनमेन पहलका लागि।
इन्भेस्टएसएल नेबरहुड एकता कोष
लगानी उनीहरूको सिर्जना गरिएको छ छिमेकी एकता कोष छिमेकी संगठनहरू, सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरू, र स्थानीय साना व्यवसायहरूलाई COVID-१ weather को मौसममा मानवीय, संगठनात्मक र आर्थिक पूर्वाधारहरूको छेउछाउको स्तरमा सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्न।
यो जडानमा छिमेकी इनोभेसनहरू अनुदान औपचारिक र अनौपचारिक छिमेकी संघहरू र यस्तै संगठनहरूका लागि उपलब्ध छ। को सीडीसी स्थिरता अनुदान मुख्य अपरेशनहरू, कर्मचारीहरू र स्वस्थ कार्य वातावरणहरू कायम गर्न वरपर केन्द्रित समुदाय विकास संगठनहरूको लागि उपलब्ध छ। र छिमेकको सानो व्यवसाय लिफ्ट अनुदान स्टाफ, सुविधा र अन्य आवश्यक लागतहरू कायम गर्न छरछो सेवा गर्ने साना व्यवसायहरूको लागि उपलब्ध छ।
कोष स .्कलनकर्ता
यो चेरोकी स्ट्रिट समुदाय सुधार जिल्ला र चेरोकी-लेम्प विशेष व्यवसाय जिल्ला GoFundMe सिर्जना गरेको छ, C चेरोकी स्ट्रिट देखाउनुहोस्, १ 150० भन्दा बढी स्थानीय व्यवसायहरू र तिनीहरूका कर्मचारीहरूलाई चेरोकी स्ट्रिटमा सहयोग गर्न। व्यवसाय र कर्मचारीहरु पर्छ एउटा अनुप्रयोग पूरा गर्नुहोस् सहायता प्राप्त गर्न।
यदि तपाईंलाई व्यक्ति वा साना व्यवसायका लागि थप संसाधनहरूको बारेमा थाहा छ भने, कृपया हामीलाई थाहा दिनु त्यसैले हामी तिनीहरूलाई थप्न सक्छौं।
तपाईं हाम्रो अन्य पोस्ट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ सूची समावेश गर्न साना व्यवसायहरू जुन तपाईं समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ यो संकटको समयमा।
तल दायर गरिएको Covid-19. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. Covid-19, DT2, र डचटाउन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 14th, 2020 .
डचटाउन STL.org Covid-19 हाम्रो डचटाउन छिमेकीहरूको लागि मद्दत गर्नुहोस्